We.com.mm - ကြက်ဥ/ဘဲဥ ထဲမှာ သွေးစလေးတွေ ပါနေရင် စားလို့ရပါသလား?
အိမ်တိုင်းမှာ ကြက်ဥ/ဘဲဥ ဆိုတာ မရှိမဖြစ်တဲ့ စားသောက်ကုန်လို ဖြစ်နေပါပြီ။ အရေးပေါ်စားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်တိုင်းလိုလို ကြက်ဥ/ဘဲဥ ဆောင်ထားတတ်ကြပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြက်ဥရဲ့ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေကို စမ်းသပ်လေ့လာသူတွေက ငြင်းခုန်နေကြပေမယ့်လည်း ကြက်ဥဟာ ယနေ့ထက်ထိ လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုအဖြစ် နေရာယူထားဆဲပါပဲ။
ဘာကြောင့် သွေးစလေးတွေ ပါနေတာလဲ?
တစ်ခါတလေ ကြက်ဥကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါ အတွင်းထဲမှာ သွေးစလေးတွေ ပါနေတာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ သွေးစတွေက ဘယ်ကရောက်လာတာလဲ? သွေးစတွေပါနေရင်ရော စားလို့ရလား? လွှင့်ပစ်လိုက်ရမလား? တချို့သူတွေကလည်း ကြက်ကောင်ပေါက်လေးတွေ ဖြစ်ခါနီးမို့လို့ သွေးစလေးတွေ ပါနေတာဖြစ်တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်က အဲလို မဟုတ်ပါဘူး။ ဥစားကြက်တွေက ကြက်ဥ ဥနိုင်ဖို့ ကြက်ဖမလိုပါဘူး။ ဥစားကြက်ရဲ့ ဥကလည်း အကောင်မပေါက်နိုင်ပါဘူး။
ကြက်ဥခွံထဲက အနှစ်တွေဟာ အခွံထဲမရောက်ခင် ကြက်မရဲ့သားအိမ်ကနေ သွေးကြောတွေကို ဖြတ်လာခဲ့ရပါတယ်။ အဲလိုဖြတ်လာတဲ့အချိန်မှာ သွေးကြောပွန်းပဲ့တာမျိုးဖြစ်ပြီး သွေးစလေးတချို့ ပါနေတာပါ။ တချို့ရှားပါးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေမှာဆိုရင် ကြက်ဥအဖြူနှစ်ထဲမှာ အညိုရောင်/မီးခိုးရောင် အသားစလေးတွေ ပါနေတာမျိုး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ရတာက ကြက်မရဲ့ မျိုးပွားအစိတ်အပိုင်း ပွန်းပဲ့သွားပြီး ဥထဲမှာ ကပ်ပါလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စားလို့ရပါတယ်။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ စိတ်မသန့်ရင်တော့ သွေးစလေးတွေကို ဖယ်ပြီးမှ ချက်ပြုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကြက်ဥအနှစ်တွေဟာ တော်တော်လေး ပန်းရောင်သန်းနေတယ်/နီနေတယ်ဆိုရင်တော့ လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။ အဲလိုဥမျိုးကျတော့ ဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့ ဖျက်ဆီးခြင်းခံထားရတာကြောင့် မစားသင့်တော့ပါဘူး။
သွေးစလေးတွေပါလာတာမျိုးကတော့ ရှားပါတယ်။ တချို့ကလည်း မရောင်းခင် ကြက်ဥမှာ အနာအဆာ ပါမပါ သေချာစစ်ဆေးပြီးမှ ဈေးကွက်ထဲ ပို့ကြတာပါ။ ဒီလိုသွေးစတွေပါနေတာမျိုးဆို မရောင်းကြပါဘူး။ တစ်လုံးတလေတော့ ပါကောင်းပါသွားနိုင်တာပေါ့။ ဒါကြောင့် အညိုရောင်ပိုသန်းတဲ့ ကြက်ဥတွေမှာ သွေးစတွေ ပါတတ်ပါတယ်။ ကြက်ဥအညိုရောင်က စက်နဲ့ အတွင်းကိုဖောက်ကြည့်ဖို့ ပိုခက်ခဲလို့ပါ။ ဒါကြောင့် သွေးစတွေ ပါလာမှာစိုးရင်တော့ သိပ်မညိုတဲ့ဥမျိုးကို ရွေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ကို အမြန်ဆုံး ကိတ်လာစေမယ့် အစားအစာများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်အတွင်း ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အစားအစာများ
အိမ်မှာ ဝက်သားတုပ်ထိုး အဝလုပ်စားမယ်။